Mukadzi anozvivanza sei kuti anokuda | Stylish Men
Alicia tomero | 09/06/2022 10:00 | Vakaroorana uye Bonde
Zvakamboitika kwauri here kuti musikana waunoda, anokudawo, asi anozvivanza? Isu hatinyatso kuziva mukati mevanhu, asi zviratidzo nezvikonzero zvakasiyana-siyana haugone kuvanza kuti munhu anonzwa kukwezvwa uye hunhu hunoshamisa.
Mukadzi anokwezvwa nomurume anogona kana kuti haavanze mamiriro ezvinhu akadaro, asi kana shungu dzake dzakasimba zvikuru inogona kutooma mitezo. Kunyangwe nehumbowo hwese kana zviratidzo zvishoma, kana iwe usingakwanisi kuve nechokwadi kuti musikana anokuda kana kuti nei asingatauri chero chinhu, pamwe. chimwe chinhu chinofanira kuitwa pamusoro pazvo. Ziva zviri kuseri kwemusikana anovanza kuda kwake.
1 Pane zviratidzo zvinoratidza kuti anokuda
2 Zvikonzero nei mukadzi asingatyi kutora danho rekutanga
3 Mukadzi anohwanda sei kuti anokuda?
Pane zviratidzo zvinoratidza kuti anokuda
Sense yechitanhatu zvinogona kugara matiri nguva dzose inotiudza kuti pane chimwe chinhu. Mukadzi iyeye anogona kuburitsa zviratidzo zvinoburitsa pachena, hazvina mubvunzo here? Dzimwe nguva ivo havana kudaro provable, nokuti unoda kuvanza kana nokuti une zvikonzero kuzvitsigira.
Zvikonzero nei mukadzi asingatyi kutora danho rekutanga
Zviratidzo izvo zvinogona kutumira, pasina kupokana, hazvigone kuvanzwa zvakanyanya. Nekudaro, iwe unozotenda kuti maitiro ake haashamisi zvachose uye izvi madiki nuances anoita kuti iwe uone kuti anokuda chaizvo. Mukadzi achaedza zvakanyanya sezvinobvira kuvanza kuti anoda murume, kunze kwekuti ari kuedza kuvanza zviri pachena nokuda kwechimwe chikonzero.
Kunyara Ndicho chimwe chezvikonzero zvakajeka. Mukati mechirevo ichi, zvakakosha kuongorora kusachengeteka kwavo, sezvo chokwadi ichi chinotonga mune zvakawanda zvakakosha zvisarudzo. Kushaya maturusi akakwana ekutarisana nechokwadi ichi kana kutora nhanho kumashure kune chikonzero chakakwana.
Mukadzi iyeye angasaita seanonyara, asi pane kudaro vanozvikudza, vanozvikudza uye vanozvivimba. Uye ndezvekuti, kunyange zvazvo achitarira muzvinhu zvose zvokuva mumwe munhu ane chengeteko yakakwana, zvichida haana unyanzvi hwose hwokutarisana nechiitiko chakadai.
Humwe hunhu hunoita kuti vanhu vade, asi vasingagone, imhaka yekuti vane a kutya kukuru kurambwa. Vanonzwa dzvinyiriro huru nokuda kwekuda kuita chinhu chiri chose zvakanaka asi zvakadaro vanodavira kuti mukufamba kwenguva zviito zvavo zvinogona kuvatambanudzira.
kungwara mupfungwa Inogonawo kutamba chiitiko chakaipa, pamwe chete nekusava neunyanzvi hwakakwana hwekushamwaridzana kuti vakwanise kuratidza manzwiro avo. Muzviitiko izvi, mukadzi anogona kugumburwa pane humwe hwehumwe hunhu huri pamusoro uye, pasina kugadzirisa kunokwanisika, otiza mamiriro acho.
Murume anovanza sei kuti anoda mukadzi?
Mukadzi akashinga uye ane chivimbo achatarisa mukomana waanoda uye haitarisi kure. Zvisinei, paanotarisa divi zvinogona kureva kuti haafariri kana kuti ari kunyengera. Pane zvikonzero zvakawanda nei uchigona kuisa parutivi, uye zvinogona kusanganisira kunyara. Kana akakutarisa zvakare mushure mekunge wamutsausa, imhaka yekuti ane hanya newe.
Pane zviratidzo zvakati kuti zvinogona kuongororwa kuti uone kana mukadzi iyeye achifarira, kunyange kana zvisingaite sekudaro. Mukadzi anogona kunge akachinja maitiro ake nekuti pane mumwe munhu waanofarira, zvisinei, anogara achinyengerera. Zvikonzero nei ichivanza isu takambozviongorora kare, asi zviratidzo zvinotsanangurwa pazasi:
Kunyemwerera kwacho. Kana achigara aine kunyemwerera kwakanaka kwauri, akasiyana, anowedzera kudiwa, ane misikanzwa kana kutotya, zvinoratidza pachena kuti anokufarira.
Chengetedza zvakanyanya mufananidzo wako. Kana wakaziva mukadzi iyeye kwenguva refu, unganzwa kuti mapfekero ake achinja, unonzwa kuti iye zvino anopfeka zvikuru. Zvipfeko zvako nevhudzi zvichanyanya kutarisirwa uye iwe uchashandisa pefiyumu yakanaka.
gara munzvimbo dzakafanana kana kuti inogara iri padyo nemasocial circles ako. Haisi tsaona pazvinoitika kakawanda, uye imhaka yekuti anofarira mafambiro ako uye anogara achimutsa kusangana ikoko.
Matauriro aunoita anoratidzawo kana achikuda. Mutsa ndihwo hunokosha Anogara achiteerera kune zvese zvaunomuudza uye kunyangwe pakutaura, tarisa kuti sei haana kukanganwa zvakawanda muhurukuro dzenyu.
Ongorora zviratidzo zvemuviri wako. Kana iwe usingade kuti zviburitswe, pamwe muviri wako unozopa mamwe mashoko. Semuenzaniso, kana muviri wake nechiso zvichigara zvakanongedza kwauri, imhaka yekuti anofarira. Kana iwe uchigara uchibata bvudzi rako kana kugadzirisa zvipfeko zvako, izvi zvakare zviratidzo.
Kana uri kutaura teerera kana akatarisa mumaziso ako kana kutarisa mamwe mativi echiso, akadai semiromo. Kana tsoka dzako dzakati fambei zvishoma uye uri kutotamba-tamba nezvitsitsinho zvako.
Zvichipa zviratidzo, zviratidzo, humbowo kana zvifukidziro zvisingauyi munhoroondo, kana iwe uchida mukadzi iyeye uye pasina munhu anotora danho, iwe uchafanirwa kutora danho diki. Kana usina chokwadi, hapana chinhu chiri nani pane Edza kuzvisuma kana kuronga nguva. Kana nguva yakawandisa yapfuura uye iwe haugone kumirira kwenguva yakareba, iwe unofanirwa kuita sarudzo uye neruremekedzo edza kuona kana mukadzi iyeye ane chimwe chekuvanza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Stylish Varume » Kukodzera » Vakaroorana uye Bonde » Mukadzi anohwanda sei kuti anokuda?